Vaovao - boaty fisakafoanana plastika azo ampiasaina azo ampiasaina amin'ny fitehirizana sakafo
Fahasalamana sy fiarovana: ny boaty fisakafoanana plastika azo atsimo dia vita amin'ny fitaovana BPA Free ary tsy misy fofona hafahafa rehefa mafana.
Maharitra sy azo ampiasaina indray: boaty fisakafoanana plastika azo ampiasaina azo ampiasaina dia mahery tokoa, afaka maharitra maharitra ary azo ampiasaina imbetsaka.
Habeny mety: boaty fisakafoanana plastika azo atsimo dia fitoeran-javatra ampiasaina amin'ny fikarakarana sakafo. Ny habeny dia mety amin'ny fanaraha-maso sy fanesorana sakafo. Ny fahafaha-manao dia 26oz / 750ml, 34oz / 1000ml, 1500ml / 51oz. Ahitana: fonosana 50 sy fonony 50.
Mora ampiasaina: boaty fisakafoanana plastika fanary dia fitoeram-bokatra, azo ampiasaina amin'ny fanasana vilia ao an-trano ihany koa.
Aza adino: ireo kaontenera ireo dia tsy tokony hapetraka ao anaty lafaoro. Ny sakafo be sandry dia tsy maintsy diovina alohan'ny haverina. Raha misy menaka, tavy, siramamy na sira be loatra ny sakafo dia aza mampiasa boaty fisakafoanana plastika azo atsipy. Rehefa hafanaina haingana loatra, ny hafan'ireto sakafo ireto dia mety hahatratra 100C / 212f. Rehefa mampiasa ny lafaoro mikraoba dia alao antoka fa sokafy ny sarony. Ao amin'ny vata fampangatsiahana dia mihabe sy manify ny fitaovana, izay mety hahatonga ny kaontenera vaky na ho vaky.
Ny fonosana sakafo dia ampahany lehibe amin'ny entam-barotra. Izy io dia iray amin'ireo tetik'asa lehibe amin'ny fizotry ny indostrian'ny sakafo. Izy io dia afaka miaro ny sakafo sy misoroka ny fahasimban'ny biolojika, ny simika ary ny lafiny ivelany ara-batana amin'ny fizotry ny fivezivezena hanakanana ny ozinina amin'ny mpanjifa. Izy io koa dia manana ny fitazonana ny kalitaon'ny sakafo tsy miovaova mihitsy. Mety amin'ny fanjifana sakafo izy io, ary io no voalohany mampiseho ny fisehon'ny sakafo sy mahasarika ny mpanjifa. Izy io dia manana ny sandany mihoatra ny vidin'ny materialy. Noho izany, ny fizotran'ny famonosanan-kanina dia ampahany lehibe amin'ny injenieran'ny rafitra famokarana sakafo. Saingy ny fahamaroan'ny fizotran'ny sakafo dia mahatonga azy hanana rafitra mahaleo tena.
Nahoana isika no tokony hampiditra ny hevitra manokana momba ny teny hoe "fonosana sakafo" voalohany? Ny antony lehibe indrindra dia amin'ny fiainana andavanandro, mino aho fa olona maro no hanontany raha azo ampiasaina indray ilay boaty fisakafoanana plastika fanary ary hafiriana no azo ampiasaina, ary hafa ny valiny. Ny ankamaroan'ny olona dia aleony tsy mampiasa indray, fa tsia. Izay no antony ilatsahantsika mampiditra "fonosana sakafo" aloha.
Raha mbola tsy ampiasaina amin'ny mari-pana avo lenta izy io ary madio isaky ny mandeha dia azo ampiasaina imbetsaka mandra-pahatapiny na tsy tianao hampiasaina, fa ny antony dia ny boaty fisakafoanana plastika azo ampiasaina dia ampiasainao kilasy fonosana sakafo.
Fotoana fandefasana: Apr-16-2021